ပေတူးနှင့်အလွဲများ - YTV
Home » Promo » ပေတူးနှင့်အလွဲများ
Promo July 24, 2020 9:17 am
? ဟာသကိုမှ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲလေး ကြည့်ချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးနေမြဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YTV Free To Air Channel ကနေ အခုတစ်ခါမှာတော့ ပေတူးရဲ့ အလွဲလေးတွေကို ဆောင်ယူလာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်.
?‍♂ ပေတူးဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘယ်လောက်မှန်အောင် ကြိုးစားနေပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ အလွဲလေးတွေသာ ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ ဟာသလေးတွေနဲ့ အလွဲလေးတွေကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာနဲ့ ကြည့်ရှုပြီး အမောလေးတွေ ပြေပျောက်သွားစေဖို့အတွက် တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…..
? ဒီ ပေတူးနဲ့အလွဲများဆိုတဲ့ မြန်မာဟာသဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုတော့ လာမယ့် တနင်္လာနေ့ကနေစပြီး အပတ်စဉ် တနင်္လာကနေ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိ ညစဉ် (၆) နာရီအချိန်တိုင်းမှာ တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းသမျှကို ချွေးသိပ်ပေးဖို့ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်တာကြောင့် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု အားပေးကြပါဦးနော်………..
? တနင်္လာနေ့ ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ – ညနေ (၆) နာရီ
? သောကြာနေ့ ၊ စနေနေ့ – နေ့လည် (၁၂) နာရီ (၁၅) မိနစ်